Mila Sitraka Amin’i Merkel i Morsi Kanefa Mbola Ao Anaty Korontana i Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2013 10:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Deutsch, عربي, English
Nalaza ny sary “photoshop”n'ny filoha Ejipsiana Mohammed Morsi nanoroka ny lehiben'ny mpitondra fanjakana (chancelier) alemana Angela Merkel, ka niteraka fanebahana teo amin'ireo mpiserasera, izay nitsikera an'i Morsi ho nandany andro nankany ivelany amin'ny fotoana anjakan'ny korontana ao amin'ny firenena. Tsy nandray ilay sary ho tena izy ny Ejipsiana tamin'ny aterineto, tahaka ny fandraisany an'i Morsi sy ny politikany.
Eman Hashim nanoratra hoe:
@EmanHashim: Ity no sary tena izy izay natao Photoshop tamin'ny endrik'i Morsi ka nanambaran'izy ireo fa manoroka an'i Angela Merkel izy. Tsy mankafy azy izahay saingy asan'ny mpirahalahy [Miozolomana] ny mandainga .
Nizara ny sary tena izy izy, izay mampiseho an'i Merkel miaraka amin'ny filoha Frantsay Nicolas Sarkozi.
Nalaza ity sary “Photoshop-n'i Morsi manoroka an'i Merkel ity
Belal Fadl nanamarika hoe:
@belalfadl: Hosoka ny sarin'i Merkel manoroka an'i Morsi ary miandry ny fanambaran'i Merkel izahay izay hilazany fa Alemana izy ary mino ny siansa, fa tsy mino ny anjara ratsy
Hatem Ghaleb nilaza hoe:
@HFGhaleb: Namazivazy an'i Morsi ny onjam-peo alemana iray ary nilaza fa indrisy, tokony hihaona aminà vehivavy tsy misalotra sarondoha “hijab” izy ary mihaino ny heviny. Manahoana i Merkel.
Tao amin'ny YouTube, Alaa Ali nandefa lahatsary ahitana resadresaka tamin'ireo sokajin'olona mitsikera an'i Morsi:
Ary tao amin'ny Twitter kosa, Mohammed Maree nanazava bebe kokoa ny antony tsy nampahomby an'i Morsi. Taminà andian-tsioka, hoy izy:
@mar3e: Mandainga amin'i Ejypta i Morsi ary mandainga amin'i Alemaina ihany koa. Mbola hanohy handainga foana izy ary handainga handainga hatrany tsy mahalala menatra intsony na dia kely aza. Hotsarovana amin'ny maha-mpandainga azy izy
@mar3e: Nandainga i Morsi tao Alemaina izay nilaza fa: Manaja ny zon'ny olona amin'ny finoana aho. Koa manao ahoana ary ny Bahais sy ny Shiita ao Ejipta izay voaràra tsy mahazo mampihatra ny fombam-pivavahan'izy ireo sy hanokatra toerana hivavahana?
Maree nanamarika hoe:
@mar3e: Nanjary loza ho an'ny rehetra ny fipetrahan'i Morsi eo amin'ny fahefana, anisan'izany ny tenany. Tsy mahavita na inona na inona izy ary tsy fahombiazana ireo [Mpirahalahy Miozolomana]. Tsy laboratoaram-panandramana i Ejypta
Ary hoy izy namarana:
@mar3e: Raha tsy mamaly ireo fitakiana eny an-dalambe i Morsi hatramin'ny Zoma, hanenina amin'izany izy sy ireo [Mpirahalahy Miozolomana]. Tsy hisy intsony ny vahaolana tsotra sy ny safidy afa-tsy ny manongana azy, na inona na inona ho tohiny